HomeWararka MaantaRamos Oo Qiray In Kooxdiisu Ka Samirtay Hanashada La Liga
Cadalool-(Arbaca -May-8 ) – Difaacyahanka kooxda Real Madrid, Sergio Ramos ayaa qiray in kooxdiisu si caddaan ah uga samirtay hanashada horyaalka dalka Spain ee La Liga, kadib barbar dhac niyadjab ah oo ay Arbacadii la galeen Real Valladolid.
Kooxdan uu layliyo macallin Carlo Ancelotti, ayaa waxay qaybtii hore ee ciyaarta heleen gool uu u saxeexay Ramos, waxaanay haysteen fursad ay ku yareeyaan dhibcaha ay ka horreeyaan Barcelona iyo Atletico Madrid, laakiin waxa soo waajahay jab fool xun.
Haddii ay toddobaadkan badiyaan Barcelona iyo Atletico, waxa uu tartanka Spain noqon doonaa mid u dhexeeya labadooda, waxaana meesha ka bixi doona damicii Real Madrid, laakiin haddii la qabto labadaasba waxa dib u soo noolaanaysa Real Madrid oo ka dhursugi doonta kulanka u dambeeya ee tartanka.
“Waa wax laga xishoodo waayo in aanaan guulaysanin laba kulan wax suurtogal ah maaha. Si caddaan ah ayaanu hadda u khasaarnay” ayuu yidhi Ramos.
“waxa aanu dayacnay fursad qaali ah” ayuu raaciyey.
Ramos wuxuu sheegay inay kooxdiisu iska nasatay markii ay goolka dhaliyeen, taasina ay ahayd waxa khaladka keenay, waxaanu tibaaxay in marka lala ciyaarayo koox doonaysa inay ka badbaado horyaalka heerka labaad in ay adaygtahay in la nasto, waxaanu yidhi “Niyadda kooxdu way wanaagsanayd, kulankana waanu dili karaynay. Xisaab ahaan wali waxa jirta fursad, markaa Real Madrid waa inay dagaalka waddaa”.
Griezmann Oo Ku Biiray Atletico Madrid
Suarez Oo Kulankii Koowaad U Saftay Barcelona – Ciyaartii 1 aad & Koob